‘अव केटी पछि लाग्न छाड्छन’–आर्यन-Nagarikaawaj.com
‘अव केटी पछि लाग्न छाड्छन’–आर्यन
चकलेटी आर्यनलाई मनको राजा सोच्नेहरु निराश हुने भएका छन । किनकी अव उनको विहे पक्का भएको छ । विहीवार काठमाण्डौमा एक समारोह विच ईन्जगेजमेन्ट गरेका चकलेटी नायक सिग्देलले झन्डै चार वर्Èअघिको चिनाजानीपछि गा“सिएको प्रेमसम्बन्धलाई विवाहमा बदल्न लागेका हुन् । काठमाण्डौकी सपना भण्डारीसँग विहे गर्न लागेका सिग्देल ईन्गेजमेन्टको समयमा निकैनै खुसी देखीएका थिए । नेपाली चलचित्रमा नयाँ र एक्स्ट्रा किसीमको अभिनयले समेत चर्चीत वनेका आर्यन सधै युवतिहरुको विषयले समेत झन चर्चामा पु¥र्याउदै आएको थियो । उनै नायक आर्यनसँग रामजी ज्ञवालीको छोटोमिठो कुराकानी ।
ईन्जगेजमेन्टपछि कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
– रमाईलो फिलीङ भैरहेको छ । खुःसी निकैनै छु । झण्डै दुई घन्टा लामो थियो हाम्रो ईन्गेजमेन्ट कार्यक्रम । निकैनै रमाईलो पनि भो । धेरै समझदार अनि उत्तीकै राम्री स्वभाव भएकी सपनालाई जीवनसंगिनीको रुपमा पाउन लागेकामा खुसीको सिमानै छैन भन्दा हुन्छ ।
सपना जि सँग पहिलोपटक कहाँ भेट भएको थियो ?
– काठमाण्डौमै सिटी सेन्टरमा भेट भएको हो । त्यसदिनदेखी हाम्रो नजर एकअर्कातिर वसेको हो ।
ईन्जगेजमेन्ट भएपनि विवाह कहिले भनेर वताउनुभएको छैन किननी ?
– विवाहको मिति तय भईसकेको छैन । ईन्जगेजमेन्ट भयो अव जहिले गरेपनि सपना मेरै ।
तर परिवारले वैसाखतिर गर्ने भन्नुभएको छ र नी ?
– यो वेलामा बहिनी, ज्वाई, भान्जी लगाएत वाहिरवाट आउनुभएको छ । अरु वेला कहिल्यै सँगै भेट हुन पाउने अवसर थिएन । उहाँहरु बाहिरबाट आएकोले अहिलेै ईन्जगेजमेन्ट गरिएको हो । मेरा वहिनीज्वाई अस्ट्रेलियाबाट छोटो बिदामा आएका थिए । सवै भएको वेलामा वहे गर्न नपाएपनि ईन्जगेजमेन्ट गरौ भनिएयो । यद्यपी विहे चाहि यो वेला भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । जहिलेपनि हुन सक्छ ।
युवतिहरुको मामिलामा निकैनै चर्चित हुनुहुन्छ, अव त फ्यान घट्ने पो हुन की ?
– मैले विहे नगर्दा फ्यान हुने र विहे गरेपछि फ्यान घट्ने भन्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यद्यपी मलाई जति केटीहरु मरिहत्ते गर्थे उनिहरु चाहि पछि हट्नु स्वभाविकै हो ।
थोरै मनको कुरा, आफ्नी श्रीमती कस्ती खालको होस भन्ने तपाईको चाहाना हो ?
– मैले यस अघि पनि भनिसके । आफ्नी श्रीमतीको वारेमा वयान गरेर त सकिदैन । अनि श्रीमती यस्ती होस भन्दा पनि मलाई हरेक पाईलामा राम्रोसँग वुझोस भन्ने चाहाना हो ।
सपना जि को सवैभन्दा मनपर्ने एउटा कुनै वानी ?
– एउटा हैन धेरै वानीले मलाई आकर्षीत गरेको हो । खास त उनि निकैनै समझादार छिन् ।